Vatongi 17 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
17 Zvino kwaiva nomumwe murume wokunzvimbo ine makomo yaEfremu+ ainzi Mika. 2 Kwapera nguva yakati, akati kuna amai vake: “Masirivha chiuru nezana amakatorerwa mukatuka+ nokuda kwawo uyewo mukazvitaura ndichinzwa—tarirai! sirivha yacho ndinayo. Ndini ndakaitora.”+ Amai vake vakati: “Mwanakomana wangu ngaakomborerwe naJehovha.”+ 3 Naizvozvo akadzorera amai vake masirivha chiuru nezana;+ amai vake vakati: “Chokwadi ndichatsaurira sirivha yacho kuna Jehovha ichibva paruoko rwangu nokuda kwomwanakomana wangu, kuti ndiite mufananidzo wakavezwa+ nomufananidzo wakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa;+ zvino ndichaidzorera kwauri.” 4 Naizvozvo akadzorera sirivha yacho kuna amai vake, amai vake vakatora masirivha mazana maviri vakaapa mupfuri wesirivha.+ Iye akagadzira mufananidzo wakavezwa+ nomufananidzo wakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa;+ uye wakava mumba maMika. 5 Zvino murume wacho, iye Mika, aiva neimba yavanamwari,+ akagadzira efodhi+ neterafimu,+ akapa simba+ mumwe wevanakomana vake, kuti ave mupristi wake.+ 6 Mumazuva iwayo pakati paIsraeri pakanga pasina mambo.+ Munhu wose aiwanzoita zvakanga zvakarurama kwaari.+ 7 Zvino kwaiva nejaya rokuBhetrehema+ riri muJudha remhuri yaJudha, uye raiva muRevhi.+ Rakanga richigara imomo kwenguva yakati. 8 Munhu wacho akaenda achibva muguta reBhetrehema riri muJudha kuti anogara kwenguva yakati chero kwaangawana nzvimbo. Paaifamba akazosvika kunzvimbo ine makomo yaEfremu kumba kwaMika.+ 9 Mika akabva ati kwaari: “Unobvepi?” Iye akati kwaari: “Ndiri muRevhi anobva kuBhetrehema riri muJudha, ndiri kuenda kunogara chero kwandingawana nzvimbo kwenguva yakati.” 10 Naizvozvo Mika akati kwaari: “Gara neni uve baba+ nomupristi+ wangu, uye ini, ndichakupa masirivha gumi pagore nenguo dzenguva dzose nezvokudya zvako.” Naizvozvo muRevhi wacho akapinda. 11 Nokudaro muRevhi wacho akabvuma kugara nomurume wacho, jaya racho rikava somumwe wevanakomana vake kwaari. 12 Mika akapawo muRevhi wacho simba,+ kuti jaya racho rive mupristi+ wake uye rirambe riri mumba maMika. 13 Nokudaro Mika akati: “Zvino ndava kuziva kuti Jehovha achandiitira zvakanaka, nokuti muRevhi ava mupristi wangu.”+